Taageerayaasha Xisbiga UCID oo khalkhal geliyay xisbiyada kale ee KULMIYE iyo UDUB | Xarshinonline News
Taageerayaasha Xisbiga UCID oo khalkhal geliyay xisbiyada kale ee KULMIYE iyo UDUB
Posted by xol2 on June 6, 2010 · Leave a Comment
Hargeysa,(NNN)- Taageerayaasha xisbiga Mucaaradka ah ee UCID, ayaa shalay isu-soo-baxyo balaadhan ka dhigay magaalooyinka waawayn iyo degmooyinka dalka.
Isu-soo-baxaas oo qayb ka ah ololaha doorashada Madaxtinimada oo xisbiga UCID shalay maalintiisii koowaad u dabaal-degay, waxay taageerayaashu ku muujiyeen cududooda iyo taageerada ay u hayaan xisbigaas.
Murashaxa jagada Madaxweynenimo ee UCID Eng. Faysal Cali Waraabe, ayaa khudbad u jeediyay kumanaan ka mid ah taageerayaashiisa ku dhaqan magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer.
Fagaaraha Burco oo ay hadalo ka jeediyeen xubno ka tirsan hoggaanka UCID, waxay taageerayaashooda uga warameen barnaamijyada ay dalka ku hagi doonaan haddii ay qabtaan talada dalka. “Walalayaal, waxa mihiim ah in aynu taariikhda dib u milicsano, 26 June waxaynu u dabaal-degaynaa 50 sanno guuradii ka soo wareegtay markaynu xornimada ka qaadanay Ingiriiska, kontonkaa sannona wax inaga dhaca mooyee wax inoo kordhay may jirin, waxaana sababay hogaanka oo inaga xumaday,” ayuu yidhi Murashaxa UCID. Wuxuuna ka waramay marxaladihii kala duwanaa ee ay soo martay Somaliland tan iyo 1960-kii. “Anagu UCID ahaan waxa aanu nahay iyadoo la leeyahay shir Beeled hala qabto raggii diiday qabyalada ee Xisbigi u horeeyay fura oo UCID ah, maantana waxa aanu wadnaa Kitaabka iyo in dalka lagu xukumo shareecada Islaamka. Maxkamadda dalka waxa aanu dhigaynaa Kitaabka Quraanka ah, waxaanuna Maxkamadaha fadhisinaynaa Culimada waaweyn ee dalka haddi aanu talada dalka ku guulaysano ma arki doontan Madaxweyne iyo qof shicib ah oo isku haysta neef Adhiya, ma jirayso Maxjar dambe oo dadka lagu dhaco, ma jiri doonto TOTAL dambe iyo ganacsi kooto la galiyaa. Waxanu dalka ka dhigaynaa mid loo siman yahay iyo cadaalad ku wada noolasho iyo in aanu ka shaqayno horumarka dalka,” ayuu raaciyay. Wuxuuna taageerayaasha Togdheer ka codsaday in si isbedelkaa loo hirgeliyo la taageero xisbiga UCID.
Murashaxa UCID waxa uu baaq u jeediyay bulshada ku dhaqan degmada Buuhoodle iyo dawladdaha jaarka la ah Somaliland. “Reer Buuhoodle waxa aanu u fidinaynaa gacan walaalnimo iyo wadahadal ee ma doonayno dagaal. Somaliland ma kala go’i karto, markaa walaalayaal gacan wanaagsan baanu idiin soo fidinaynaa wixii aad tabanaysaan waynu wada dhamaynaynaa. Laakiin, Somaliland uma baahna dhiig dambe, uma baahna dagaal dambe, waxaana inoo cibaaro ah waxa ka socda Xamar. Dawladaha jaaraanka ah waxa aan leeyahay Jabuuti waxaanu leenahay waanu idiin soo halganay oo idiin dhimanay ee iska daaya koruboodada aad Soomaaliya ugu boodaysaan. Waxaan leeyahay, Somaliland way jiraysaa ee imaansada oo dhawra wada noolaanshaha iyo walaaltinimada. Itoobiya waxa aan leeyahay laba isku helimaysaan, in wixiinu si fudud dalkayaga u soo galaan, waxa dalkayaguna kootarabaan noqdaan, haddii aanu talada qabano arrintaa waanu kala hadlaynaa dawladda Itoobiya, anagoo dhawrayna jaar wanaaga,” ayuu yidhi guddoomiyaha UCID. Wuxuuna intaa ku daray, in xisbi ahaan ay doonayaan in Itoobiya qaataan Milixda iyo Kalluunka Somaliland.
Murashaxa UCID waxa uu sheegay in maalintooda labaad oo ku beegan 8-da bisha, in aanay qaban doonin isu-soo-baxa ololaha, isla markaana kharashka maalintaas ku baxaya ay ku caawin doonaan Carruurta Agoomaha iyo Bukaan-jiifka Cusbataalada.
Waxa uu balanqaaday in haddii ay talada qabtaan ay wax ka qaban doonaan adeegyada bulshada oo uu sheegay inay dayacan yihiin, wuxuuna sheegay in waxbarashada ilaa heer dugsiga Sare ay bilaash ka dhigi doonaan.
Eng. Faysal Cali Waraabe waxa uu sheegay in haddii ay talada qabtaan ay jaar wanaag kula noolaan doonaan Koonfurta Soomaaliya oo uu sheegay in aanay Somaliland dib ula midoobi doonin. “Dawladda Soomaaliya ee aynu walaalaha nahay , daris-wanaagsan ayaynu ka dhiganaynaa, laakin Soomaliland laba u dulqaadan mayso mar dambe UDUB ma dooran doonto waana ka mamnuuc, dadka reer Somalilandna mar dambe Xamar ku noqonmayso oo waa inaga xaaraan,” ayuu raaciyay. “Reer Burcow qabiilkiinu waa reer Togdheer, waxa laydinka doonayaa isku duubni iyo wadajir. Markaa waxaanu idiin wadnaa hadaanu nahay xisbiga UCID isbedel dhab ah iyo barnaamijka xisbiga ee aad aragteen oo aanu sidiisa u fulinayno. Sidaa awgeed, waxaan idiin sheegayaa UDUB way saqiirtay oo ka hadli mayo, balse labada xisbi Mucaarid waxaad ku kala dooranaysaan barnaamijkooda siyaasadeed iyo dadka ku jira. Xisbiga cadaalada iyo daryeelku maanta waxa uu idiin wadaa barnaamij aanu doonayno inaad ku doorataan, kaasoo aanu isbedel ku keeno. Waxaanu idiin wadnaa dad cusub oo musharixiin ah oo uu kaw ka yahay Musharaxa Madaxweynaha ee xisbiga UCID Eng. Faysal Cali Waraabe iyo ku-xigeenkiisa Dr. Maxamed-Rashiid iyo rakaabka ay soo wadaan ee wasiirada noqonaya,” sidaana waxa yidhi guddoomiye kuxigeenka UCID Aadan Maxamed Mire (Waqaf) oo isna hadal ka jeediyay fagaarahaas.
Waxa kale oo iyana halkaas ka hadlay guddoomiyaha Jaamacadda Burco, ahna Xoghayaha Beeraha UCID Prof. Cabdiraxmaan Jaamac Ducaale, guddoomiyaha gobolka Togdheer ee UCID Cusmaan Ibraahim Nuur, Xildhibaan Xuseen Maxamed Cige, Axmed Xuseen Fagfagaash iyo masuuliyiin kale.
Isu-soo-baxii UCID ee Hargeysa:
Taageerayaashii ugu badnaa oo isugu yimi fagaaraha Beerta Xorriyada, waxa hadalo ka jeediyay masuuliyiin sarsare oo ka tirsan xisbigaas oo ay ka mid yihiin guddoomiyaha golaha Wakiilada Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi, Murashaxa jagada Madaxweyne ku-xigeenka UCID Dr. Maxamed-Rashiid Sheekh Xasan, Madaxa ololaha doorashada Madaxtooyada UCID, Xildhibaano golaha Wakiillada ka tirsan iyo masuuliyiin kale. “Waxa ay maanta (shalay) ugu horaysaa maalintii xisbiga UCID loo qorsheeyey, waana maalintii ololihiisa la xidhiidha doorashada Madaxweyenimada ee ugu horaysay, waa maalin taariikh leh. Waxaa kaloo maalintani tahay maalintii xabsiga Mandheera laga jebiyey ee laga sii daayay dadkii xaqdarada ku xidhnaa ee 5-tii June 1983-kii,” ayuu yidhi Murashaxa Madaxweyne kuxigeenka UCID.
Waxa uu ku dheeraaday barnaamijka hogaamineed ee xisbiga UCID iyo sida loogu baahan yahay in bulshadu uga fiirsato masiirkeeda, wuxuuna ka codsaday inay garab istaagaan xisbigaas. “Xisbi UCID waxa uu dhisi doonaa dawlad kooban oo tayo leh, annaga oo ka turjumayna rabitaanka shacabka, waxa aanu goo’aansanay inaanay tirada Wasiiradu ka badan 18 Wasiir. Xisbiga UCID waxa uu si aqooni ku dheehan tahay ku maamuli doonaa xilliga kala-guurta ah haddii ilaahay nagu guuleeyo doorashada. 12 maalmood ee ugu horeeya waxa aanu qabanaynaa laba arrimood oo muhiim ah oo ay isu imanayaan aqoonyahanka wax-garadka Somaliland oo aanu u soo bandhigi doonoo barnaamijkayaga wax-qabad. Waxa kale oo aanu qabanaynaa shirka kale oo muhiim ah oo aanu ku casuumayno baayac-mushteriga Somaliland, kuwa Soomaaliyeed iyo Ajanabi kasta oo doonaya inay wadanka maal-gashato,” ayuu raaciyay.
Dr. Maxamed-Rashiid waxa uu sheegay in xisbi ahaan ay muhiimad gaar ah siinayaan dhalinyarada iyo Haweenka, si ay uga qaybqaataan talada dalkooda.
Guddoomiyaha ololaha doorashada Madaxtooyada ee xisbiga UCID Saleebaan Daahir Cabdilaahi oo isna hadal kooban ka jeediyay halkaas, waxa uu taageerayaashaa uga mahadceliyay siday ugu soo baxeen xisbiga, una muujiyeen taageerada ay u hayaan. “Dadlka Somaliland isbedel uun uma baahnee, waxa uu u baahan yahay badbaado oo meel halis ah yaynu maraynaa, idinka ayaana badbaadin karaya,” ayuu yidhi guddoomiyuhu.
Xildhibaan Cabdiraxmaan Cusmaan Caalin oo isna hadal kooban ka jeediyay isu-soo-baxaas, waxa uu dadweynahaa ku booriyay inay taageeraan xisbiga UCID, si loo hirgeliyo himilooyinka horumarka dalka.
Dhinaca kale, isu-soo-baxyo la xidhiidha ololaha doorashada Madaxtooyada ee xisbiga UCID, ayaa shalay ka dhacay magaalooyinka Ceerigaabo, Boorama, Berbera, Gabiley iyo Wajaale.
Dibad-baxa Boorama oo kumanaan taageerayaal ahi isugu soo baxeen, waxa hadalo ka jeediyay Afhayeenka xisbiga UCID Xasan Xuseen Codyare iyo masuuliyiinta xisbigaas ee gobolka Awdal, kuwaasoo dadweynaha ku dhiirigeliyay inay taageeraan xisbigaas.
Xoghayaha guud ee xisbiga UCID Muuse Xaaji Muxumed Guulleed (Inji), ayaa isna shalay dadweynaha ku dhaqan Gabiley iyo Wajaale kala qaybgalay isu-soo-baxyo ay dhigeen, kuwaasoo ay ku muujiyeen taageerada ay u hayaan xisbigaas.
Mr. Inji waxa uu sheegay in haddii ay talada qabtaan ay dalka ku hagi doonaan Shareecada diinta Islaamka, isla markaana ka shaqayn doonaan horumarinta dalka.
Filed under doorashooyinka, UCID, xisbi
← Dhoolatuskii Xisbiga Kulmiye iyo Taageerayaashiisa + Khudbadihii Masuuliyiinta Xisbiga + Sawirro
Nin ku nool waddanka Soomaaliya oo nolosha la wadaaga Yaxaasyo ay saaxiibeen →